Ola. Get rides on-demand 4.9.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.9.1 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Ola. Get rides on-demand
Ola. Get rides on-demand ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Ola cabs app ကိုတစ်ဦးစီးနင်းစာအုပ်ဆိုင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံး & အမြန်ဆုံးလမ်းပေးထားပါတယ်။ ဘန်ဂလို, ချင်နိုင်း, ဒေလီ, မွန်ဘိုင်း, Hyderabad, ကိုလ်ကတ္တား, Pune, Jaipur, & Ahmedabad အပါအဝင် 100+ မြို့ကြီးများမှာပိုထက် 3,00,000 cabs & တက္ကစီနှင့်အတူ Ola အိန္ဒိယတွင်လူကြိုက်အများဆုံးတက္ကစီဘွတ်ကင်န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏နောက် Ola စီးနင်းအတွက်ဘယ်မှာသွားပါလိမ့်မည်နည်း app ကို Download လုပ်ပါ, အစာရှောင်ခြင်းဆိုင်းအပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ် & သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစီးစာအုပ်ဆိုင်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့အလွှဲပြောင်းကုဒ်ရှိပါသလား? သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်အခမဲ့ရဖို့ကြောင်းကုဒ်အတူတက်မှတ်ပုံတင်ရန်!
အဆိုပါ Ola app ကိုပေါ်ရရှိနိုင်နာမည်ကျော်ခရီးသွား options တချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
•အော်တို: စျေးနှုန်းအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ & haggling ၏လုပ်ရတဲ့မပါဘဲအော်တိုစာအုပ်ဆိုင် အမြန်ဆုံးလမ်း
•ဝေမျှမယ်: စာအုပ်2ထိုင်ခုံမှထတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်ခရီးသွားလာတခြားသူတွေနဲ့ AC အကားများဝေမျှဖို့။ ပုံမှန်တက္ကစီကိုပုံမှန်အတိုင်းအပေါ် 50% အထိ Save
•ဝေမျှမယ် Express ကို: fixed လမ်းကြောင်းအပေါ် shared cabs အတွက်ခရီးသွားလာခြင်းဖြင့်အချိန် & ပိုက်ဆံ Save
• Micro နဲ့: စာအုပ်မြို့အတွင်းစျေးအသက်သာဆုံး AC အတက္ကစီရုံရူပီးမှာစတင်။6/ ကီလိုမီတာ
• Mini ကို: အိတ်ကပ်-friendly ကိုပုံမှန်အတိုင်းမှာ comfy AC အ Hatchback အတွက် ခရီးသွား
ချုပ် Sedan •: အခမဲ့ Wi-Fi ကို & Top-rated ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူ ထိပ်တန်း Sedan
ချုပ် Play ကို•: High-rated ချုပ် Sedan အခမဲ့ In-တက္ကစီဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူ။ သွားလာရင်းရုပ်ရှင်, ဂီတ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကဗီဒီယို streaming များ & ပိုပြီးပျော်မွေ့
•ချုပ် SUV ကား: ပိုပြီးထိုင်ခုံနှင့်အတူကျယ်ဝန်း SUVs အခမဲ့ Wi-Fi ကို & ထိပ်ဆုံး rated ယာဉ်မောင်း
• LUX: မယှဉ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်အတိုင်းမှာ Top-of-the-line ကိုဇိမ်ခံကားအတွက် ခရီးသွား
• Outstation: အခမဲ့ In-တက္ကစီဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူတတ်နိုင်တလမ်း & ပတ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းမှာမြို့ထဲကစီး။ , သီခငျြးမြား, ရုပ်ရှင်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကဗီဒီယို streaming များ & ပိုပြီးခံစားပါ။
•အငှားဌာနများ: အားလုံးသင့်ရဲ့မြို့ခရီးစဉ်များအတွက် အဆိုပါတတ်နိုင်ကားတစ်စီးငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်း rated မိတ်ဖက်ခြင်းဖြင့်မောင်းနှင် cabs ငှားဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်ချိန်နာရီ packages များထံမှ Choose
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်များလမ်းကြောင်းအညွှန်းများအတွက် onboard GPS စနစ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားတဲ့လာကြ၏။ အဆိုပါ app ထဲမှာအားလုံးကိုသင့်ရရှိနိုင်စီးနင်း options များရှုပါ။
•သင့်ပစ်ကပ်တည်နေရာ (စသည်တို့ကိုဥပမာမူလစာမျက်နှာ, ရုံး, လေဆိပ်, မီးရထားဘူတာရုံ, လက်ရှိတည်နေရာ) Set
•သင့်တည်နေရာအနီးရှိအားလုံးရရှိနိုင် cabs / အငှားယာဉ်များကိုမြေပုံပေါ်တွင်ပြသခံရခြင်းကိုကြည့်ပါ
•စသည်တို့ကိုငွေသား, Ola ငွေ, UPI, ခရက်ဒစ်ကဒ်, အပါအဝင်မျိုးစုံငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာကနေရှေးခယျြပါ
•သင်ချင်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားကိုရွေးပါ & '' NOW ကစီးနငျးတိုကျခိုကျ '' ကိုအသာပုတ်
ဆပ်ဖို့အကွိမျမြားစှာနည်းလမ်းများ•: အတွက်ငွေသားသို့မဟုတ်မျိုးစုံ Ola ပိုက်ဆံ, UPI, debit card လိုမျိုး cashless options တွေကိုအကြွေးကတ်များ Jio ပိုက်ဆံစသည်တို့မှတဆင့်သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်ငွေပေးချေ
•ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ပိုပြီး Cab, အော်တို & Share ကို Pass ကိုအတူ: Cab Pass ကို, အော်တို Pass ကို & Share ကို Pass ကိုနှင့်သင်၏နေ့စဉ်အသွားအပြန်အတွက်ပိုပြီးငွေစုခံစားကြည့်ပါ
• Ola ကို Select လုပ်ပါ: Mini ကိုပုံမှန်အတိုင်း & ပိုပြီးမှာချုပ် Sedan တူသောသီးသန့်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးသော်လည်းတစ်ခု Ola ကို Select လုပ်ပါအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာ
•ပုံမှန်အတိုင်း & စီးနင်း features တွေကိုသိပါ: ဘွတ်ကင်မတိုင်မီပုံမှန်အတိုင်း & တစ်ဦးစီးနင်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး features တွေ Check
• Ola Play: ချုပ် SUV ကား, Lux, Outstation နှင့်အခြားရွေးချယ်ရန်စီး, ချုပ် Play တွင်အခမဲ့ In-တက္ကစီဖျော်ဖြေရေးခံစားပါ။ သီခငျြးမြား, ဗီဒီယိုများ, ရုပ်ရှင်များ, တီဗီရှိုးများနှင့် go အပေါ်ပိုပြီး Play!
•တစ်ဦးစီးနင်းဆွဲ: ဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေကြိုတင်မဲအတွက်အငှား / တက္ကစီစာအုပ်ဆိုင်မှ '' နောက်တော့စီးနငျးတိုကျခိုကျ '' ကိုရွေးချယ်ပါ
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူခရီးသွား•: သူတို့သည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုခြေရာခံ & သင်သည်လုံခြုံစွာနေရကြ၏ကိုသိနိုင်အောင် မိသားစု & သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်ကိုမျှဝေပါ
သင်တို့သည်လည်းကော်ပိုရိတ်စီးအဖြစ်အလုပ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ခရီးစဉ် tag နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အရာရှိတဦးကအီးမေးလ်လိပ်စာမှာဤအစီးအဘို့အငွေတောင်းခံလွှာများကိုရပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီများကအလွယ်တကူန်ထမ်းများအတွက်စီးကိုခြေရာခံ & စပွန်ဆာမှ Ola ကော်ပိုရိတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
မေးခွန်းများကိုရှိသလား? ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် Ola ထောက်ခံမှုက်ဘ်ဆိုက် (https://help.olacabs.com/support/home) သို့သွားရောက်သို့မဟုတ် support@olacabs.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးပါ။
အွန်လိုင်းကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူချိတ်ဆက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်အပျက်အပေါ် up to date ဖြစ်နေနေပါ။
• Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ - https://twitter.com/Olacabs
•ကြှနျုပျတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကဲ့သို့ပင် - https://www.facebook.com/Olacabs
• Instagram ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ - https://www.instagram.com/olacabs
Ola. Get rides on-demand အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Ola. Get rides on-demand အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Ola. Get rides on-demand အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Ola. Get rides on-demand အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 7.57k 6.03M
Ola. Get rides on-demand ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Ola. Get rides on-demand အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.9.1
ထုတ်လုပ်သူ Birds Eye Systems
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.olacabs.com/info/faqs#privacyPolicy
Release date: 2019-06-07 18:01:50
လက်မှတ် SHA1: 3B:8D:83:2C:B5:7F:4A:55:5F:DA:B6:4F:06:AD:F4:10:1F:F1:0C:74
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ajinkya Potdar
Ola. Get rides on-demand APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ